Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: velom-bolo ny mpifidy | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: velom-bolo ny mpifidy
Niverina nitsiry ny fanantenan’ny mponina raha nahita sy niheno ny sasantsasany amin’ireo olona naneho ny heviny momba an’i Naina Andriantsitohaina izay tsy nampoizina hametraka filatsahana amin’ny fifidianana izay ho ben’ny tanànan’Antananarivo. Matoa moa naniry fiovana ny vahoaka dia efa niova toe-tsaina, nitombo fahamatorana ny betsaka ka sarotra hofetsifetsena amin’ny fampanantenana poak’aty ary tsy hanaiky horesen-dahatra avy amin’ny fanaratsiana ny mpifaninana. Vita teo izany fampandriana adrisa sy fampiesonana amin’ny fanambarana toy ny hoe minoa fotsiny fa haintsika izao sy izao, izay midika tsy filàna fanazavazavana ny fahaizany samy irery dia antoka fa izy no mahavita azy. Mahavita inona moa ? Nofinofy no varotana, varotra angady tanimanga fanaon’Ikotofetsy sy Imahaka.
Tsy ilain’ny olona koa ny fiverenana amin’ny tantara sy olona teo aloha. Ny fifaninanan’i Rajoelina sy Ravalomanana efa nivalona tamin’iny fandresen’ i Andry Rajoelina voafidy Filoha-pirenena, ny HVM koa andaniny efa iny lasa aloka iny sisa. Na ny mpitolona tao aminy aza tsy sahy nilatsaka hanandratra ny kely sisa tavela.
Ny ho avy izany no hany resaka. Ahoana moa no tsy hampitarafina ny filamatry ny fivoarana irina hiseho eto amin’ny fiarahamonina ary ambara imaso ny ahatongavana amin’izany ? Hatreo aloha dia fampanofinofisana, raha mijanona eo dia fampiesonana fotsiny, izay tsy hahafa-po ny mponina intsony. Ny asa hanomezan-toky fa hatao ary asahiana mivelirano ho antoky ny fanefana azy, no dingana voalohany, fa ilain’ny olona ho fantatra koa ny tetika sy fomba ary ny fitaovana kasaina ho an’ny fanatanterahana ny asa. Avy eo vao mieritreritra ny mety fahombiazan’ny rehetra. Lasa amin’izay rehefa resy lahatra vao mandinindinika ilay olona manolo-tena hitantana ny fikojakojana ny andavanandro iainana mandava-taona eto amin’ny renivohitr’i Gasikara. Manam-panahy ve izy ahafahany hitantana am-pahendrena ny tontolo iainan’ny mponina sy ny mpandalo eto Andrenivohitra ? Ampy fisainana sy fahaizana ve izy ahafahan’ny olona hanantena fa ho hainy mandrary sy mandrafitra ny asa rehetra takian’ny fikoloana sy fanajariana ny tanàna mba hiverenan’Antananarivo ho tanàna maha te honina ?
Toy izany ny zavatra tsy maintsy velabelarina ahafahana mandresy lahatra ny vahoaka efa manana traikefa tamin’ny fiaretana taon-tsarotra vokatry ny finoana fampanantenana mamy any an-tsofina mangidy tsakoina.